कसरी नोम पेन्ह बाट सिहानकोभिले सम्म पुग्नु (2018) - कोह रङ्ग भ्रमण
गत वर्ष वा त्यसैले त्यहाँ नोम पेन्ह कसरी सिहानकोभिले (र उपाध्यक्ष) बाट कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने केही प्रमुख परिवर्तनहरू छन्। शानदार नयाँ बस कम्पनीहरु देखि धेरै राम्रो ट्याक्सी सेवाहरूमा, पहिलो क्रस-देश रेल गर्न, यो कहिल्यै सजिलो एक शहर देखि अन्य प्राप्त गर्न भएको छ। यहाँ बसहरू, ट्याक्सीहरू, रेलहरू, र नोम पेन्ह र सिहानाउकोभिले बीचको उडानहरूमा सबै नवीनतम जानकारी छ। यदि तपाईं हेड गर्दै हुनुहुन्छ Koh Rong or Koh Rong Samloem, हेर्नुहोस्: सिहानाउभिले देखि कोह रङ.
कोह रोंग चाँडै विकास हुँदैछ, र अहिले यो सुन्दर द्वीपमा हेर्न र त्यसो गर्न धेरै अधिक छ। यहाँ हामी Koh को सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र गतिविधिहरु संक्षेप संक्षेप मा जाँदैछौं ...
सुसमाचार - बरसातको मौसम यस सालको अन्त्यमा आइपुग्छ जस्तो देखिन्छ, लगभग अक्टोबरको सुरुमा। सूर्य चमकिरहेको छ र हरेक दिन राम्रो र तातो छ! ...
18 / 10 / 2018 in सिहानाउभिले, परिवहन